အရင်းနှီးဆုံးပန်းတစ်ပွင့် – Grab Love Story
ပြောရဦးမယ်….ကိုက သူ့ကိုဖုံးနဲ့ ဆက်ပြီးကြူရတာလေ…သူက အစကတော့ အင်တင်တင်ပဲ …သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အိုက်တင်ကပေးသေးတာပေါ့၊နောက်တော့လဲကိုက နှဲ့ပါများတဲ့အခါကျသူကလဲစိတ်ပါလာတာပေါ့၊အတွေ့ကြုံတွေကတော့နှစ်ယောက်လုံး ဆရာတွေပါပဲ…အဲလိုနဲ့ ဟိုတယ်ကိုချိန်းတော့လာမယ်..လမ်းကစောင့်နေတဲ့….ဒါနဲ့ ကိုတို့ မန်းလေးကန်တော်ကြီးက လမ်းပေါ်မှာစောင့်နေတာပေါ့၊ရောက်လာတော့ မိုတယ်လေးထဲဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်သွားကြပြီးပါကင်ထိုးလိုက်ကြတယ်၊ကောင်းတာက အဲမိုတယ်က အတွင်းထဲဝင်ရတာဆိုတော့ လမ်းထဲချိုးဝင်လို်က်ရင် အပျောက်ပဲလေ…နောက်ထပ်ကောင်းတာက ဝစရှင် ကို ဝင်စရာမလိုပဲ အခန်းတွေဆီကို တန်းဝင်လို့ရတယ်….အဲ မ်ိုတယ်အပေါက်မှာ ဧည့်ကြိုကောင်လေးတွေက အဆင်သင့်စောင့်နေကြပါတယ်….
ကို့ကား၊ဆိုင်ကယ်ဝင်လာရင် ပါကင်ကိုတန်းပြီးလိုက်လာတယ်…နောက် အခန်းမေးပြီးတန်းဝင်လိုက်ယုံပါပဲ(မိုတယ်အစားကြော်ညာဝင်ပေးတာပါ…)၊အဲလိုနဲ့ အခန်းထဲရောက်တော့ သူက ဘာပြောမှာလဲတဲ့ ….ကိုကလဲ တန်းပြီးဖက်တာပေါ့….အမယ်…သူက ပြုံးပြီး ရုန်းဟန်ဆောင်သေးတယ်…ဘယ်ရမလဲ…ကိုကအတင်းဖက်နမ်းပြီး ကစ်စင်ဆွဲတော့တာပဲ….အစနဲနဲရုံးသလိုလုပ်ပေမဲ့ .နောက်တော့ သူလဲ ပြန်ဖက်လာပါတယ် အဲဒါနဲ့ အနမ်းတွေကလဲပိုပိုကြမ်းလာတာပေါ့ဗျာ…သူကလဲပြန်တောင်ဖက်ပြီး လျှာလေးတောင်ကစားလာပြီလေ…..နောက်တော့ ကစ်စင်ဆွဲရင်းနဲ့ပဲ ကုတင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်ပါတယ်၊ဆက်နမ်းရင်းကနေ သူ့ အကျီင်္ကို ချွတ်ပါတယ်….မှတ်မှတ်ရရဇာအကျီင်္လေးပေါ့….လယ်ပင်းတွေနမ်း…..ရင်ဘတ်အထက်ပိုင်းကိုနမ်း…. လက်မောင်းကို နမ်း.အို…စုံနေအောင်နမ်းတော့တာပေါ့…. သူလဲမျက်လုံးမှိတ်သွားပါပြီ…..ဘော်လီချွတ်တဲ့အခါမှာတော့ ခါးလေးကို ကော့ပေးလာပါတယ်…ဂျိတ်ကိုဖြုတ်…ဘောလီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တော့ နို့သီးလေးတွေတောင် ထောင်နေကြပြီကိုး……အဲထောင်နေတာလေးတွေကို လျှာလေးနဲ့ ရစ်ရစ်ပေးလိုက်တော့ နဲနဲငြီးလာပြီ….ဆက်ပြီး အားရပါးရ စို့တော့တာပေါ့….ဘယ်ညာပြောင်းကာပြောင်းကာစို့၊စုတ်၊ညှစ်၊ရစ် ….အို…ပညာစုံသုံးရတယ်ပေါ့လေ….သူလဲပိုငြီးလာတယ်…
.နောက်စကပ်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ပိပိဖေါင်းဖေါင်းကြီးက ပင်တီအောက်မှာ အရည်စိုစိုနဲ့ ကားတင်းနေတာပါပဲဗျား…ဒါနဲ့ …နို့ …ဘိုက်…တဖြည်းဖြည်းနဲ့…ချက်… .အောက်ကိုဆင်းဆင်းလာလိုက်တာ ပင်တီပေါ်ကိုလဲ နဲနဲတော့ ပွတ်ယက်ကလေး လုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်လေ…..တော်နေတော့ ပင်တီကို ဆွဲချွတ်တဲ့အခါ ချွတ်ရလွယ်အောင်ခါးကိုတောင်ကော့ပေးလိုက်သေး……တွေ့ပါပြီ…ရတနာသိုက်….အမွှေးအမျှင် တစ်ပင်မှ မရှိတဲ့ ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ ပိပိကြီး….မိုက်မှမိုက်ဗျာ….ဒီဘူတာဆိုက်မယ်ဆိုတာ သူလဲသိထားတယ်ဆိုတာ အဲဒီအမွှေးလေးတွေတစ်ပင်မှမကျန်အောင်ရှင်းထားတဲ့ အနေအထားလေးက သက်သေပြနေတယ်ပေါ့….ဟုတ်တယ်ဟုတ်……ပိပိအကွဲကြားလေးထဲမှာ အရည်ကြည်လေးတွေ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်စိုနေတယ်လေ….ကိုလဲ အဲဒါမြင်တော့ မနေနိုင်တော့ဘူး….
ဒါနဲ့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲတဲ့ပြီး ကုတင်အောက်ကနေ ဒုးထောက်ပြီး ဂျာတော့တာပဲဗျို့……ကောင်းလိုက်ချက်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့….အစတော့..နဲနဲ ချဉ်သလိုလိုပါပဲ…နောက်ပိုင်းကြ အချဉ်လျှော့သွားတာပေါ….စီးပိုင်နေတဲ့ အရည်တွေလဲ ပိုပြီးထွက်လာတယ်သိလား…..သူလဲ တအင်းအင်းနဲ့ တအီးအီးနဲ့ နေတာပေါ့…..ပေါင်ကြားထဲကခေါင်းကိုလဲလက်နဲ့ပွတ်လိုက်…ခေါင်းကို ပေါင်နှစ်လုံးနဲ့ ညှပ်လိုက်နဲ့ ဖီးလ်တွေ အတော်ကိုတက်လာတယ်…..ကိုလဲလုပ်သာလုပ်နေရတာ ကင်မရာပုံးတွေလဲကြောက်လို့ မျက်စိကလျှင်ရသေးတယ်…..ကံကောင်းလို့ မရှိပါစေနဲ့ပဲဆုတောင်းရတာပေါ့…..အဲနောက်တော့ ကိုလဲမနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်…ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး …ညီလေးကိုထဲ့လိုက်တာစီးစီးလေးဝင်သွားပါတယ်………ကောင်းထာ…..နောက် ဆက်ဆောင့်တော့ ကိုကပြီးချင်ချင်ဖြစ်လာတာနဲ့ ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကို အပေါ်ကလုပ်ခိုင်းလိုတယ်…..“ကျနော်လုပ်ရင်နာမှာစိုးလို့ မ ဖာသာလုပ်ပါ…”ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်….သူလဲမြင်းစီးတော့တာပေါ့…
“အင်း….အင်းးးး…”နဲ့နေတာပဲ….. ကိုလဲအောက်ကနေသူ့ နို့နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ စုံကိုင်ပြီးနယ်တော့တာပေါ့….သူက ခေါင်းကိုလန်လန်သွားအောင်ဆောင့်ပါတယ်…. ကို့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်ထောက်ပြီးဆောင့်လိုက်….ကို့ပေါင်ပေါ်ကို လက်ထောက်ပြီး ဆောင့်လိုက်နဲ့ …ပါးစပ်ကလဲ ညီးချက်တော့ အခန်းထဲလဲဆုနေတာပဲ….အဲလိုနဲ့ သူလဲအဆောင့်ကြမ်းလာတဲ့ အချိန်မှာ ကိုလဲထိမ်းလို့မရတော့တာနဲ့ လရေတွေ ထွက်ကုန်ပါလေရော….သူလဲ ကို့ ရင်ဘတ်ပေါ်ခေါင်းစိုက်ကျသွားပြီးမှိန်းနေတော့တာပါပဲ…. အဲလိုနဲ့ ကို့အပေါ်က သူဆင်းလိုက်တော့ ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကို့ညီလေးအရင်းမှာလဲ အရည်တွေကိုရွှဲပြီးပုံနေလိုက်တာ သမံသလင်းပေါ် ဆီအိုးမှောက်ထားသလားထင်ရပါ့….သူလဲ ရေချိုးခန်းထဲတုံးလုံးလေးဝင်သွားတယ် …ခဏကြာပြန်ထွက်လာတော့ ရေချိုးခန်းထဲက တဘက်နဲ့ ပတ်ပြီးထွက်လာပါတယ်….ရှက်သွေးဖြန်းနေပြီး ကို့ကိုသိပ်မကြည့်ရဲသလိုဖြစ်နေလို့ အားပေးစကားပြောရသေးတယ်…“ထင်ထားတာလောက် မဟုတ်ပါလား….အေးပေါ့လေ…ကျနော့်ဟာက သေးတော့ အမ အားမရဖြစ်နေမယ်ထင်ပါရဲ့…”လို့ စကားရောဖေါရောပြောတော့…“သေးမသေးတော့မသိဘူး…ဒီမှာ စပ်ကိုနေတယ်…”လို့ပြောတယ်လေ…“ဒါဆို အားရရဲ့လား….”လို့မေးတော့ “ဘာတွေမေးတာလဲမသိဘူး….”လို့ရှက်ပြီးပြောတာနဲ့ “အော်….အမကလဲ ..လုပ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့…မရှက်ပါနဲ့ဗျာ….ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့”လို့ပြောတော့ ခေါင်းတော့ ငြိမ့်ပါတယ်လေ…. ဒါနဲ့သူ့ကိုရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီး သူ့ကိုယ်လုံးလေးအနှံ့အပြားကို ပွတ်သတ်ပေးနေတာပေါ့……
သူကလဲကို့ညီလေးကို လာကိုင်ပြီးဆွတော့ တောင်လာပါလေရော…..သူက“ဟင်…ထလာပြန်ပြီ…အားမရသေးဘူးလား..”လို့မေးတော့ “အင်း..အားမရသေးဘူး”လို့ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူက သူ့ခေါင်းကိုအောက်လျှောပြီး လွေပါလေရောဗျာ…..ကောင်းလုိုက်တာဗျာ…..တစ်ခါမှ အဲလိုမခံစားဘူးဘူး…. အဲဒီကုတင်ပေါ်မှာ သူကလေ မှုတ်လိုက်တဲ့အမှုတ်များ…မိုက်ချက်ဗျာ….အော် …တော်တော်ကောင်းတာပဲ…..ကိုအနေနဲ့ အဲလောက်ကောင်းအောင် အမှုတ်မခံဘူးတာ အမှန်ပါပဲ..“အား….ကောင်းလိုက်တာမရယ်…”လို့ကိုပြောယူရတယ်… ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါ…တကယ်ကို ကောင်းတာပါ… သူကမေးသေးတယ်…“အဲလိုမခံဖူးဘူးလား…”တဲ့ …“မခံဘူးပါဘူးမရယ်….တကယ်ကောင်းတာပါ…”ဆိုတော့ ကို့ကို သနားတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ….အဲဒါနဲ့ မှုတ်တာရပ်ခိုင်းပြီး သူ့ကိုကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေဆော်တော့တာပဲ……သူက အသားဖြူတော့ သူ့ခါးလေးကိုကိုင်ပြီး ဖြူဖွေးနေတဲ့ သူ့ရဲ့ဂစ်တာရှိတ်ပုံလေးကို အပေါ်စီးကနေကြည့်ကြည့်ပြီး ဆောင့်လို့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ…..အဲလိုနဲ့ အရှိန်ရလာတော့ သူလဲဖီးတက်လာ…ကိုလဲ ဖီးတက်လာတာနဲ့ အသားကုန်ဆောင့်ပြီး ပီးပြစ်လိုက်ကြပါတော့တယ်…..နှစ်ယောက်သားမှောက်ရက်ထပ်ရက်ကြီးကို တော်တော်ကြာပါတယ်…နောက်မှ ထပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြတာပေါ့….
အဲအချိန်မှ ကြာချိန်ကလဲ ၂.နာရီလောက်ရှိပြီဆိုတော့ ကွက်တိပဲလေ…ကိုတို့က ၂.နာရီကို ၁၀၀၀၀.ကျပ်နဲ့ အဲအခန်းကို ယူထားတာကိုး….အဲဒါနဲ့ ကောင်လေးတွေခေါ်၊ငွေရှင်း၊ နှာခေါင်းစည်းတွေကိုယ်စီစီးပြီး(အသိတွေ့မှာစိုးလို့) ဆိုင်ကယ်ကိုယူကြပြီး ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်…..အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဆင်ပြေလား ဖုံးဆက်မေးရသေးတယ်…….အင်း….ရေးရင်းနဲ့ သတိရလာပြီနော်…. ကြားကာလမှာတော့ ဖုံးဆက်ပြီးကြူရတာပေါ့..သတိရတယ်…ညီလေးလဲငိုနေတယ်… ညီမလေးရောဘယ်လိုနေလဲ.. ငိုနေလားဆိုတော့ “အင်း…”တဲ့ …ညီမလေးက တွေ့ချင်တယ်မပြောဘူးလားဆိုတော့ .“အင်း..ပြောတယ်..”တဲ့…..ဒါဆိုတွေ့မယ်လေ…. ဘယ်နေ့…ဘယ်ချိန်ဆိုတော့ သူကလဲ“အင်း…”ပေါ့…သူကလဲ အလုပ်လုပ်တော့စနေ၊တနင်္ဂနွေပဲချိန်းရတာပေါ့…အဲ မိုတယ်ကလဲ အဲလိုရုံးပိတ်ရက်ဆို ကိုလိုလူတွေနဲ့ ရှုတ်သားပဲ….အခန်းတောင်ကြိုဖုံးဆက်ထားရတယ်….(တစ်ခါမှ အခန်းမရတာတော့ မရှိဘူးပါဘူး…)..အပြတ်ကဲဘို့ဆိုပြီး လမ်းမှာ အေဘီစီ ၃ဘူး၊ သူ့ဘို့ စပိုင်ဝိုင်အနီ ၂.လုံးနဲ့ စားစရာမုန့်လေးတွေ ဝယ်ပြီးယူခဲ့ပြီးသားနော်…..အော်စကားမစပ် ကို့ဘို့ရာ သုတ်ဆေး တစ်လုံးဝယ်ခဲ့တယ်လေ…. သူ့သောက်ဖို့တော့ မနေ့ညအိမ်ပြန်ရင်းနဲ့ ဆော်ဖီးလာဆေး(အမှုန့်)ကို ဈေးချိုက ညဈေးတန်းမှာ ၁၅၀၀ နဲ့ ဝယ်ခဲ့တယ်..
မနက်ကျ သွား ဘို့ အစီစဉ်လုပ်တာပေါ့. ဒီတခါတော့လည်သွားပြီ….နှစ်ယောက်အတူတူမိုတယ်ထဲကို မဝင်တော့ဘူး….ကိုက အရင်သွား.. .ကောင်လေးအခန်းပြခိုင်း…. .နေရာယူ…သူ့ကိုစောင့်ပေါ့….သူကလဲ ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဖုံးဆက်..ကိုက လမ်းညွှန်..(ဟုတ်ပေါင်)အခန်းညွှန်ပေါ့….ဒီတစ်ခေါက်တော့ မနက် ၁၀း၀၀နာရီကထဲက ကိုတို့နှစ်ယောက်လုံးအခန်းထဲရောက်နေပြီလေ….ဒီတစ်ခါကျ ကို့မှာ ကင်မရာပါ ပါတယ်လေ…. အခန်းထဲသူဝင်လာတာကအစ ကိုကဓါတ်ပုံရိုက်ထားတယ်… အခန်းထဲသူရောက်လာ…ခဏအပန်းဖြေ….အေးဆေးပါပဲ…သူ့ကို ကိုယူခဲ့တဲ့ ဆော်ဖီးဆေးမှုန့်ကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီးတိုက်တော့ ကလေးကို သူ့အဖေက ဆေးတိုက်သလိုပဲ အသာတကြည် ယူသောက်ချလိုက်တာပါပဲ…ကိုလဲ ကို့ဆေးကို သောက်ပေါ့…သူကတော့ ဘာလဲညာလဲကို မမေးပါဘူး..ကို့ကို ယုံတယ်ပေါ့လေ……နောက် ဝိုင်နီကိုဖေါက်ပြီးသူ့ကိုပေး…ကိုက အေဘီစီ ကိုဖေါက်..ပြီးမှ နှစ်ယောက်သား “ချီးယားစ်….”လုပ်ပြီးသောက်လုိုက်ကြတာပေါ့…တစ်ငုံစီလောက်သောက်ပြီးတော့…သူကို အသာလှမ်းဖက်လိုက်တယ်…သူကလဲ အလုိက်သင့် မှေးမှီလာပါတယ်…..ပခုံးလေးလက်မောင်းလေးပွတ်တယ်ပေါ့ဗျာ….နောက် ပါးလေးကိုနမ်းတယ်…ဟိုဘက်ဒီဖက်ပေါ.့… . နောက်နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်တဲ့အခါ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ သူက တုံ့ပြန်လာပါတယ်…ပြန်ဖက်လာပါတယ်….
အနမ်းရှည်ကြီးနမ်းဖြစ်ပါတယ်… အချိန်ကလဲရတာကိုး….အေးဆေးပေါ့…နောက်ထုံးစံအတိုင်းလည်ပင်း၊ဂုတ်သား၊နားရွက်လေးတွေပေါ့…. အဲနောက်ရင်ဘတ်အပေါ်ဖက်ခြမ်းကို ပွတ်ပေးရင်းနဲ့ အကျီကို ချွတ်တော့တာပေါ့….အဲနောက် ဘော်လီပေါ်ကနေ နို့ကို ပွတ်ပေးတယ်…ပါးစပ်ကလဲအကုန်ရတဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို မအားရအောင်စုတ်ပေးတယ်ပေါ့…နောက် ဘော်လီချိတ်ကို ဖြုတ်ပါတယ်….နို့ပေါ်လာတော့ စို့တယ်….သာသာလေးကိုက်တယ်…. လျှာနဲ့ရစ်တယ်. .တော့တယ်ပေါ့…….ဗိုက်ကိုလဲ ပွတ်ပွတ်ပေးပါတယ်…..နောက် ကိုက ထရပ်ပြီးသူ့ကို နမ်းခိုင်းပါတယ်…သူက ကုတင်ပေါ်ကထိုင်ရင်းနဲ့ ကို့ နှုတ်ခမ်းကိုမော့နမ်းပါတယ်…နောက်ကို့လည်ပင်းတွေ ရင်ဘတ်တွေကိုနမ်းပါတယ်.ဖွဖွလေးပေါ့..နောက် ကို နို့သီးလေးကို စို့ပေးပါတယ်…လက်နဲ့ ပွတ်ခြေပေးပါတယ်..ဖီးအရမ်းကောင်းတာပဲ….ခဏနား..ဘီယာ၊ဝိုင်သောက်လိုက် ….နမ်းလိုက် ပွတ်လိုက်နဲ့တော်တော်ကြာသွားတယ်…. နဲနဲမူးလာပြီ…..သောက်ထားတဲ့ဆေးကြောင့် သူကလဲဖီးတက်…ကို့ညီလေးလဲ သံချောင်းလား အောင်းမေ့နေရပါပြီ…. အဲဒီအချိန် မှာ သူက ခဏနားပြီး အိပ်ယာကို လက်နဲ့ပုတ်ပြပြီး ..“အိပ်လိုက်….”လို့ပြောပါတယ်….
ကိုက “ဟင်…”လို့နားမလည်လို့မေးတဲ့အခါ “အိပ်ယာပေါ်အိပ်လိုက်ပါ..လုပ်ပေးမယ်…”လုိ့ပြောပါတယ်…..ဒါနဲ့ အကျီင်္၊ဘောင်းဘီတွေချွတ်ပြီး ရော်ဆိုလေးနဲ့ တက်အိပ်လိုက်ပါတယ်……သူက ကုတင်အောက်ကနေပြီးတော့ ခြေထောက်အောက်ပိုင်းကနေစပြီးနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ နမ်း၊ပွတ်၊စုတ်ပြီးတက်လာလိုက်တာ ပေါင်ခြံကိုရောက်တော့ ဒီကကောင် ကြက်သီးတွေထနေပါပြီ……နောက် ပေါင်ခြံကို ဟိုဖက်ဒီဖက် နမ်းပေးပွတ်ပေးရင်းနဲ့ ကို့ညီလေးကို အသာလေးကိုင်ပြီး ဒစ်ကလေးကို လျှာနဲ့ မထိတထိ တို့ပြီး ရစ်ပါတယ်…..နောက် ဒစ်ကို ငုံပါတယ်….လျှာနဲ့ ရစ်ပါတယ်..နှုတ်ခမ်းနဲ့ ညှပ်ပြီးစုတ်ပါတယ်…နောက်အတံကို တစ်ဝက်လောက်ငုံလိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့လုပ်ပါတယ်….ကို အော်ညီးနေရပါတယ်….နောက်ဗြုန်းဆို အတံကို အဆုံးထိ အာခေါင်ထောက်အောင်ငုံလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ကို့မှာ “အားးး…မရေ……အားး……မရေ……”နဲ့ အော်ရတော့တာပါပဲ….ကောင်းလိုက်တာဆို စာနဲ့တောင်ရေးပြလို့မရနိုင်ပါခင်ဗျာ…..သူက ဆရာကျပါတယ်……တော်ရှာပါတယ်……တွေ့တာတောင်နောက်ကျသလားလို့ပါ….အဲလိုအကုန်သွင်း အကုန်ထုတ်လုပ်လိုက်တာဟာ ကိုပြီးလုပြီးခင်ထိကိုဖြစ်သွားပါတယ်…သူက ခဏနာြး့ပီး ကို့ အပေါ်တက်လာပြီးမေးရှာတယ်….
“ကောင်းလား….”တဲ့…ဒီကကောင် ချက်ခြင်းပြန်မဖြေနိုင်ဘူး….ကောင်းလွန်းလဲို့ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတဲ့ရင်ကို ထိမ်းချုပ်ရင်း မနဲပြန်ဖြေရတယ်….“ကောင်းတာပေါ့မရယ်…. အရမ်းကောင်းတာပဲ…မခံစားဖူးဘူး….”လို့ပြောတဲ့အခါ….“အရင်တစ်ခေါက်ကထဲက အဲလိုမခံစားဖူးဘူးပြောလို့ သေချာ လုပ်ပေးတာ….” တဲ့…..လိမ္မာချက်တော့နော……..ကိုလဲ ကို့လီးကိုစုတ်ပေးတဲ့ သူ့ပါးစပ်လေးကို ဆုချတဲ့ အနေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စုတ်ယူ နမ်းပေးလိုက်ပါတယ်…..သူက “နေဦး….မပြီးသေးဘူး”တဲ့….ဘုရား….ငါတော့ သေပြီထင်တယ်ပေါ့…..အဲနောက် သူက အောက်ကို တစ်ခါလျှောဆင်းသွားပြီး ညီလေးကို တစ်ခါ စုတ်လိုက်၊ရစ်လိုက်၊မွှေလိုက်၊တော့လိုက်၊အဆုံးထိငုံလိုက်၊လျှာပြားနဲ့ ပွတ်ဆွဲလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးပြန်ပါတယ်….ကို့မှာလဲ မျက်လုံးကို မဖွင့်နိုင်တော့ပဲကောင်း လွန်းမကကောင်းနေပါတယ်…..
အဲလိုတုံးသူက လီးကိုလက်နဲ့ကိုထားပြီး ကို့ ဘောနှစ်လုံးကို စုတ်ပါလေရောဗျာ….ဘယ်လိုလေးလဲမသိဘူး….. တစ်လုံးချင်းစုတ်၊နှစ်လုံးပြိုင်စုတ်၊လျှာနဲ့ ပတ်….အို စုံနေတာပဲ…ကောင်းလိုက်ထာလေ…သိလား…..နောက် သူက “ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံး အပေါ်ထောင်လိုက်”တဲ့…..ဟိုက်…ဘာလုပ်မှာပါလ်ိမ့်ပေါ့…..အို ဘာလုပ်လုပ်ကွာ…သူလုပ်ရင် ငါကောင်းမှာသေချာပေါက်ပဲ ဆိုပြီး ခြေထောက် ကိုထောင်ပေးလိုက်တယ်လေ…ထောင်တာမှ ကိုီ့ ရင်ဘတ်ကိုကပ်ရောပဲ….အဲတော့မှ သူက ဘောကိုစုတ်၊အတံကိုစုတ် လုပ်နေရင်းကနေ ကို့ ခရေလေးကို လျှာလေးနဲ့ ရစ်ရစ်ပြီး ဝိုက်ပါလေရောဗျာ….ကို့ခရေက လျှာနဲ့ ဆက်ဆံဘို့ဆိုရင် လုံးဝ ဗာဂျင်ဆိုတော့ လုကို တုန်တက်သွားတာပဲ…. တွန့်သွားတာပေါ့… ပါးစပ်ကလဲ“အ..” ဆိုဖြစ်သွားတယ်လေ…သူက “မကောင်းဘူးလား…”တဲ့ …မြန်မြန်ပြန်ဖြေလိုက်ရတယ်..“ကောင်းတယ်.ကောင်းတယ်..”လို့….. ဒါနဲ့သူလဲကို့ခရေလေးကို သူ့လျှာနဲ့ လျှက်၊ရစ်၊ဝင်သလောက်ထိုး၊မွှေ နဲ့ ကို့မှာ တော့ အရှင်လတ်လတ် နတ်ပြည်ရောက်နေတော့တာပေါ့နော်…သူကလေ…လုပ်တတ်လိုက်တာ..အတံ၊ဒစ်၊ ထိပ်ဖျား၊ပေါင်ခြံ၊ဘော၊ခရေ..အို စုံလို့ပါပဲဗျာ….ကောင်းချက်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ နိုင်ပလပ်..ပဲပေ့ါနော်…..
လူလဲလေထဲကို ဝဲနေတာပဲ…ပါးစပ်ကလဲ… “အား….မရေ..အား…အား….မရေ… အိုး…ကောင်းလိုက်တာ…” နဲ့ အော်လိုက်ရတာလေ….ဟန်ဆောင်တာလုံးဝမဟုတ်ရပါ…ကောင်းလိုက်ချက်တော့ဗျာ…..သိလား…(အော်…ခင်ဗျားဘယ်သိမလဲ…ကျနော်တို့လုပ်နေတာကိုး….သိချင်ရင် ကိုယ့် ပါတနာကို လုပ်ခိုင်းပါနော်….)အော်..မေ့တော့မလို့ …အဲလို ကောင်းနေတဲ့ကြားထဲကနေ…ကိုက ထထပြီး လက်ထဲက ကင်မရာနဲ့ လွေနေတာကို ရိုက်ထားလိုက်တယ်လေ….သူကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး….နောက်မှ ပြဦးဆိုလို့သူ့ပြတော့…“ဟင်…မျက်နှာတွေပါနေတယ်….”ဆိုတော့..“မကလဲ….မျက်နှာပါမှ ကျနော် အလွမ်းပြေကြည့်ရမှာပေါ့…..”လို့ပြောတဲ့ အခါ..“အင်တာနက်ပေါ်လဲရောက်သွားမယ်နော်….”လို့ပြောရှာပါတယ်… သူမှုတ်တာက အရမ်းကောင်းတော့ ဒစ်ကတအားယားနေပြီ….ကြာရင် ထွက်ကုန်တော့မှာ….ဒါနဲ့သူ့ကို ခဏရပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်….“မကောင်းဘူးလား..”…တဲ့…“ကောင်းတာပေါ့….ပြီးသွားမှာစိုးလို့…”လို့ပြောတော့ “သွား…လုလည်..”တဲ့…. အဲနောက် ကိုကခဏထထိုင်တုံးရှိသေးတယ်…
”ဒေါက်.ဒေါက်.ဒေါက်…” ဘုရား….တံခါးလာခေါက်တာပါလား….ဘူများလဲပေါ့….ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်….သူလဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြေးသွားတယ်…ကိုလဲ တံခါးကို အသာလေးဟလိုက်တော့…ဝိတ်တာ…..“ဟ…ဘာတုံးညီလေး..”ဆိုတော့….“အကို….ခေါ်ထားတဲ့ ဆော်ရောက်ပြီလား..ဒီမှာဆော်တစ်ပွေက သူ့စပွန်စာအခန်းမတွေ့လို့..”ဆိုတော့“ဟာ….မင်းကလဲ ငါ့စော်ကရောက်နေပြီကွ..”လို့ပြောလိုက်မှ “အော်…ဆောရီးပါအကို…” ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်…ဆော်လေးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အလန်းလေး…ဇယားလေးပါ….ကိုတောင် လှမ်းခေါ်ထားချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားသေး.. တခါးပြန်ပိတ်တော့ သူက ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီး “ဘာတဲ့လဲ…”လို့မေးတော့ “အော်….စော်ဝယ်ကြဦးမလားလို့ မေးတာပါ..”လို့ပြောတော့ “ဟင့်….တော်တော်နောက်”ဆိုပြီးပြောပါတယ်….ကို့ညီလေးလဲ တဝက်တောင်တဝက်ညှိုးနဲ့ ဖြစ်နေတာပေါ့…..
ကိုလဲရေချိုးခန်းဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလေးလုပ်လိုက်ပါသေးတယ်…..နောက်ပြန်ထွက်လာပြီး ဘီယာနဲ့ ဝိုင်ကို ထပ်ဖေါက်ပြီးသောက်ကြပြန်တယ်ပေါ့…. .သောက်ရင်းစကားလေးပြောရင်း ဟိုပွတ်ဒီပွတ်လုပ်တာပေါ့နော်…သူပါးလေးနမ်းလိုက် …ကစ်စင်ဆွဲလိုက်…သောက်လိုက်….နို့စို့လိုက်နဲ့ …ရသာစုံခံစားနေတာပေါ့နော်…..အဲနောက် သူ့ကို အိပ်ယာပေါ်အသာတွန်းလှဲလိုက်တာပေါ့….ကိုက အပေါ်ကထပ်ပြီး ကစ်စင်ဆွဲ.. လည်ပင်းနမ်း…ဖွဖွလေးစုတ်…နို့ကိုစို့ ၊ဆွဲ၊ပွတ်..ခြေ…နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကြားမှာထားပြီး လက်မလေးနဲ့ ဝလုံးရေးတဲ့ အခါ ငြီးသံလေးတွေ ကြားရတော့တာပေါ့….လျှာကိုလဲ အလုပ်ပေး…မနားရ..အောက်ဆင်း …ဗိုက်…ချက်….ဆီးခုံ…..ပေါင်ခြံ…. ဟိုဘက်ဒီဘက်…. အဲ…..အဲဒါတွေပြီးတော့မှ… ပိပိအဖတ်လေးနှစ်ဖတ်ကို ဘယ်ညာ တစ်လှဲ့စိနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ပြုစုပေး…..လျှာက်ိုဒေါက်လုိက်ထဲ့ပြီး အစိလေးကို ပွတ်ဆွဲ….ဆွဲရင်းနဲ့ ဘေးဖက်က နှင်းဆီနှစ်ဖတ်ကို လှမ်းလှမ်းပြီး လျှာဖျားလေးနဲ့ ကော်ကော်ပေး….နဲနဲအရှိန်ရလာတော့..အစိလေးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးနဲ့ အသာလေးညှပ်ပြီးဆွဲပေးလိုက်….တော့….“အင်းး……”ဆိုတဲ့ ဖီးသံကိုများကြားလိုက်ရ …နားဝင်ကိုချိုဆိမ့်ပါဘိတော့သကိုး……နောက်..သတိရသွားတာနဲ့…..သူ့ဝိုင်ပုလင်းကိုယူ…ပိပိပေါ်ကို အသာလေးလောင်းချလိုက်တော့ သူ့ခမျာ တုန်ကနဲဖြစ်သွားသေးတယ်..
“ဘာတွေတုံး…”တဲ့…..“စပိုင်ကို စပတ်နဲ့သောက်မလို့…”လို့ပြောတဲ့အခါ..ရီပြီး…“ကြံကြံဖန်ဖန်နော်…”လို့ပြောပါတယ်..အဲနောက်.. .လောင်းထားတဲ့ ပိပိပေါ်က ဝိုင်အရည်လေးတွေကို လျှာအပြားလိုက်နဲ့ ယက်တဲ့ အခါမတော့ သူမရီနီုင်တော့ပါဘူး…..“အားး….”လို့တောင် အော်ယူရပါတယ်…(ဘယ်ရမလဲ..ငါ့အလှဲ့..)အဲနောက် တောက်လျှောက်မနားတမ်း လျှာအပြားလိုက်ယက်ပါတော့တယ်..ဝိုင်အရသာကုန်သွားလိုက်…လောင်းလိုက်….ယက်လိုက်…လောင်းလိုက်နဲ့ …ကိုလဲအာညောင်းလုလုမှာ သူ့ဆီကတောက်လျှောက်ညီးသံပေးနေရာကနေ….“အား…အားးး…..အားး……” ဆိုပြီးကော့ပြန်လန်တက်ပြီးခေါင်းကိုပိပိဆီဆွဲကပ်လိုက်တာများ ကို့မှာ အသက်ရှူမရတော့လို့ ခေါင်းကိုနဲနဲစိုက်ပြီး ပါးစပ်ကနေရအောင်မနဲရှူလိုက်ရတယ်….“ဟား….” …တော်ပါသေးရဲ့….စောက်ဖုတ်တိမ်နစ်တော့မလို့..(ရေတိမ်နစ်ရတာထက် လူဖြစ်ရှုံးလောက်တယ်ထင်ပါ့…)..သူခမျာလေ တုန်တုန်တက်နေတာများ .တော်တော်နဲ့ကို မရပ်ပါဘူး…..ကိုကတော့ သူကောင်းနေတာ ကြည့်ပြီး အရသာခံနေလိုက်တယ်….အော်…မောရကျိုးတော့ နပ်ပါ့…. “ကောင်းလားမ…”လို့မေးတော့….ခြင်ထောင်သံလေးနဲ့ “ကောင်းတယ်…..”လို့ဖြေရှာပါတယ်….
“ငါကွ…”ပေါ့….အဲလိုနဲ့ သူ့ဘေးဝင်အိပ်ပြီး သူ့စောက်ရည်တွေပေနေတဲ့ ကို့ပါးစပ်နဲ့ သူ့ကို ကစ်စင်ဆွဲလိုက်တော့လဲ သူက ပြန်ပြီး ဆွဲပေးပါတယ်….အဲဒါ အရသာပဲနော….ကိုနဲ့ သူနဲ့ ရွံနေရင်တို့ ၊ဘုန်းနိမ့်မယ်တို့ ပါလာရင် အားကြီးဖီလင်အောက်…..ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံနိုင်လေကောင်းလေပဲ…နော…..(အဖေါ်စပ်တာ)..အဲနောက်သူ့ကို“ကျနော့်ကို အအေးမှုတ်ပေးပါလား..”ဆိုတော့ “ဘယ်လိုတုံး…”တဲ့……“ဘီယာကို ငုံလိုက်..မ..”..ဆိုတော့သူက ဘီယာပုလင်းကိုဆွဲပြီး တစ်ကျိုက်လောက်ငုံပါတယ်..ကိုက “မ…အဲဒီအတိုင်း ငုံမှုတ်လိုက်…”လို့ပြောတဲ့အခါ သူက ဘီယာတွေမထွက်အောင် သူ့ပါးစပ်ကိုထိမ်းပြီး ညီလေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းငုံလိုက်တဲ့အခါ……“အားး” …ဒီတစ်ခါ အော်ရသူက ကို..ပါ….အမလေး….ကာမစိတ်ကြောင့်ပူနေတဲ့ အချိန်မှာ အေးနေတဲ့ ဘီယာက လိင်တံကို ခြုံငုံ ဝန်းရံလိုက်တဲ့ အခါ ဗြုန်းကနဲ့ ပူရာကနေ အေးးးးးးးသွားတာဆိုတော့ အေး..ကျင်..ကောင်း ကြီးပါလားကွယ်ရို့ …..ဒါလဲတစ်မျိုးကောင်းတာပဲ….(စမ်းကြည့်ကြ…စမ်းကြည့်ကြ…နော်…)အဲနောက် တဖြည်းဖြည်းပူလာပြီး သူလဲ အဲဘီယာက်ို မျိုချပစ်လိုက်ပြီးဆက်မှုတ်ပါတော့တယ်….ကောင်းလိုက်တာ…..အေးရာကနေ …တဖြည်းဖြည်းနွေး…ပူလာတာဆိုတော့ ဖီးတစ်မျိုးပါပဲနော်…သူ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်လှတဲ့ လွေချက်တွေအောက်မှာ..ကိုတဖြည်းဖ်ြည်းနဲ့ ကော့ကော့လာရပါပြီ….ကို…ပြီးချင်လာပါပြီ…သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်…
”ပြီးချင်ပြီ…မ….”ဆိုတော့ သူက မှုတ်ရင်းနဲ့ မျက်လုံးလှန်ကြည့်ပြီးခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်….ဒါနဲ့ ကိုလဲ သူက ပါးစပ်ထဲပြီးဖို့ သဘောတူတာပဲ ဆိုပြီး နောက်ဆုံးမှာ အရမ်းတင်းနေတဲ့ လိင်တံထိပ်ကနေ လရေတွေကို “ဗြစ်…ဗြစ်..”နဲ့နေအောင် ပန်းထုတ်ရင်း…..“အား….အား….အား…အား…မရယ်…ကောင်းလိုက်တာ….”ဆိုပြီး တုန်တက်ပြီး ပြီးသွားပါတော့တယ်…ကောင်းထာ..ခုတောင် သတိရလာပြီ……. ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ကြပြီး ရေချိုးကြပါတယ်….သူက တစ်ကိုယ်လုံးကို ချေးတွန်းပေးပါတယ်…ညီလေးပါ အပါအဝင်ပေါ့….သူ့ကိုလဲ ချေးတွန်းပေးရင်း သူ့ပိပိကိုပါ ဆေးကြောပေးပါတယ်….အဲနောက် သူ့ကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး ခရေရော ….ခရောတစ်ဝက်ရော ရေချိုးဆပ်ပြာ ကရင်နဲ့ ပြောင်နေအောင် တိုက်ပြီးသန့်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်….အဲနောက် တစ်ဘက်ကိုယ်စီပတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်တက်ကြပြန်တယ်….နဲနဲနုံးနေတာနဲ ခဏတော့နားကြရပါတယ်….တော်ကြာ ခုတင်ပေါ်တင် အသက်ထွက်သွားရင် ဒုက္ခ…..ဒါနဲ့ မုန့်ထုတ်စားကြတယ်….ဆင်းဒဝစ်ချ လေးဘာလေးပေါ့လေ….စားးရတာလဲ သိပ်မကောင်းပါဘူး….တဏှာစိတ်က ကြီးစိုးနေတာဆိုတော့စားရတာ ဗိုက်ပြည့် ပီးရောပါပဲ…..သောက်စရာတွေလဲဆက်သောက်တာပေါ့….နဲနဲတော့လဲ မူးနေကြတယ်ဗျ…ဒါနဲ့ ပါလာတဲ့ အောခွေလေးကို ထုတ်ကြည့်ကြတာပေါ့….ဗမာအောကားလေးတွေပေါ့…မဆိုးပါဘူး…ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်အောကားလိုတော့ မကောင်းပါဘူး.. အဲလိုနဲ့ ပွတ်သတ်ကိုင်တွယ်နေကြရင်းနဲ့ သူက ဖီးပြန်တက်လာတယ်ထင်တယ် …ကို့ကို ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးဆင့်ပေါ်ကိုအိပ်ခိုင်းတယ်…ခေါင်းကြီးက မြင့်နေတာပေါ….နောက်.. သူက ဗိုက်ကနေတစ်ဆင့် နမ်းလာရင်းကနေ ရင်ဘတ်ပေါ်တက်ခွထိုင်ပါလေရော….ပိပိနဲ့ ရင်ဘတ်ကိုပွတ်တယ်….နောက်အပေါ်ဖက်တက်လာပြီး ပိပိနဲ့ ကို့မေးစိတွေ..ပါးစပ်တွေကို ပွတ်တော့တာပါပဲ…ကိုမှာတော့ လျှာလေးတစ်လစ်ထုတ်ထားယုံကလွဲလို့ သူ့ဖာသာပဲ အထက်အောက်စုန်ဆန် ပိပိနဲ့ အားပါးတရပွတ်နေလေရဲ့…ပွတ်ရင်းနဲ့ သူ့ဖာသာ တအင်းအင်း…နဲ့ ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ….ကိုကလဲ အလိုက်သင့် သူ့ဖင်ကြီးတွေကို ဆုတ်ဆုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်….သူလဲကုတင်ခေါင်းရင်းကို ကိုင်တဲ့ပြီးပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ပွတ်တော့တာပဲဗျို့…..
ကိုလဲ ပိပိကလွဲလို့ ဘာမှမမြင်ရပါဘူး…အဲနောက်သူကမောသွားတယ်ထင်တယ် …ကုတင်ပေါ်ကို “ဟင်း..”ဆိုပြီး လှဲချလိုက်ပါတယ်……ဒါနဲ့ ကိုလဲ သူ့ဖက်လှဲ့ခွပြီး ကစ်ပေး၊နို့စို့ ပွတ်သတ်လုပ်ပေးတာပေါ့…..သူလဲ ငြီးသံနဲနဲထွက်လာတာနဲ့ သူ့ပေါ်ကို ခွတက်လိုက်ပါတယ်….ပြီးမှ ပေါင် ကို မပြီး သူ့ပိပိကို ကို့ညီလေးနဲ့ တေ့လိုက်ပါတယ်…..“လုပ်မယ်နော်….”ဆိုတော့…“အင်း….”တဲ့…ဒါနဲ့ ညီလေးကို အသာလေး တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်….ကျပ်စီးစီးလေးပါ…..သူ့မတော့ ထဲ့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တွန့်တွန့်ပြီး တုံတုံ သွားပါတယ်….“အင်း…..”ဆိုတဲ့ အင်းရှည်ကြီးလဲ ဆွဲတယ်ပေါ.့….ကိုလဲ အဝင်အထွက်လေးမှန်မှန်လုပ်ပေးနေပါတယ်….သူက အောက်ကနေကော့ပြီး ထိုးထိုးလာပါတယ်….သူ့ကို ကစ်ပေးတော့ သူ့ပါးစပ်ကနေ မမွှေး၊မနံတဲ့ အနံ့တစ်မျိုး(စာထဲမှာတွေ့ဘူးတဲ့ အတိုင်း)ကို ရှူရှိုက်ရပါတယ်….သူဖီးအရမ်းတက်နေပါပြီ….ဒါနဲ့ ကိုလဲ ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်ဆောင့်ပေးတဲ့အခါ..ညီးသံတွေပို ညံလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ အော်ဟစ်ညီးညူရင်းနဲ့ တစ်ချီပြီးသွားပြန်ပါရောခင်ဗျာ….. ကဲသူကတော့ တော်တော်လေးကိုပြီးသွားပြီ…ကိုကတော့နဲနဲလိုသေးတယ်….ဒါပေမဲ့သူ့ကို အမောဖြေခိုင်းထားပါတယ်….သူလဲအိပ်ယာပေါ်မှာ တဇောင်းလေးလှဲပြီး နားနေပါတယ်….
ကိုလဲ လက်ကျန်ဘီယာလေးသောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးလေးကို အရသာ ခံကြည့်နေမိပါတယ်…သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်….“ကောင်းလားမ…”..ဆိုတော့.“.ကောင်းတယ်”တဲ့…. အားပြတ်တဲ့လေသံလေးနဲ့ ဖြေရှာပါရဲ့….ကိုလဲ ဘီယာသောက်ပြီးတဲ့နောက် သူ့ဘေးကို သွားအိပ်လိုက်ပါတယ်…..သူကထပြီး အိမ်သာသွားပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါတယ်….နောက်ပြန်လာပြီး ကို့ညီလေးကို လာက်ိုင်ပြီး ဆွပေးပါတယ်….နောက် ကုန်းပြီး စုတ်ပေးပါတယ်….ကို့လဲ ရေမဆေးရသေးလို့ သူ့ကိုတားမလို့ပါပဲ…ဒါပေမဲ့ သူက ကုန်းစုတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ကိုလဲတားချိန်မရလိုက်ဘူး….“ကျနော်ဆေးလိုက်ဦးမယ်လေ….”လို့ပြောတော့ “ရတယ်…တို့က ပုံမှန်ဆို ရွံတတ်တယ်…ဒါပေမဲ့ သူ့မို့လို့ မရွံပါဘူး..”လို့ပြောရှာပါတယ်…..ကောင်းလိုက်တာ….အဲနောက် သူလဲ ဆွဲဆွဲပြီး မှုတ်လိုက်တာ ကို့ညီလေးလဲရာနှုံးပြည့်တင်းလာပြီပေါ့…..အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ခွေးကုန်းပုံစံ တွယ်တော့တာပဲ…..တအားကို သူ့ခါးကို ဆွဲဆွဲပြီး တွယ်ပစ်တယ်…သူကလဲ နောက်ကို သူ့ဖင်ကြီးကို ပစ်ပစ်ပေးပြီး ခံပါတယ်ခင်ဗျာ …အပေးကတော့ အလွန်ကောင်းပါ၏… ကိုလဲ အသားကုန်ကို ဆောင့်ပြီးတွယ်တာပဲ…သူ့ဖင်ကြီးတွေဆို တုန်ကနဲ…တုန်ကနဲကို နေတာပဲ…“ဖေါင်း..ဖေါင်း….ဖေါင်း….”ဆိုတဲ့ ကို့ ဆီးခုံနဲ့ သူ့ ဖင်နဲ့ ရိုက်တဲ့အသံကလဲ အခန်းထဲမှာ ဟာမိုနီကို ကိုက်နေတာပဲ….တင်ပိုကတော့တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာပေါ့လေ….ကောင်းချက်တော့ဗျာ…သူက အသားကဖြူတော့ အပေါ်ကနေ သူ့ ကိုယ်လုံး ရှိတ်ကို ကြည့်ရတာ အရသာရှိချက်ဗျာ……
ကျနော် စိတ်ကျေနပ်အောင် “အင်း…အင်း…ဟင်း…ဟင်း…”နဲ့လဲ ညီးပေးပါသေးတယ်…ဒါကတော့ လုပ်ညီးပါ…ကိုသိတယ်….ဒါပေမဲ့လဲ နားထောင်ရတာ ဖီးတက်စေပါတယ်…ကိုလဲ အားပါးတရဆောင့်ပြီးတဲ့နောက် အကဲစမ်းတဲ့အနေနဲ့ သူ့ခရေလးကို ကို့လက်ညှိုးလေး တတွေးဆွတ်ပြီး ပွတ်ပေးလိုက်တော့ သူ.တွန့်ကနဲတော့ ဖြစ်သွားသေးတယ်….ဒါနဲ့ ကိုက ဆက်ပြီး လက်မလေးနဲ့ ခရေလေးရဲ့အလည်ကအပေါက်ထဲကို ပွတ်ပေးရင်းနဲ့ နဲနဲဖိသွင်းကြည့်လိုက်တယ်….“အ…”ဆိုပြီးအသံထွက်လာပါတယ်….ကိုလဲလက်မကို တစ်ဆစ်ကျော်အောင်သွင်းထဲ့ရင်း အသွင်းအထုတ်ကို ကစားကြည့်လိုက်တယ်…သူက ဘာမှ မပြောပါဘူး…..ဒါနဲ့ ရလောက်မယ်ဆိုပြီး ညီလေးကို တံတွေးဆွတ်၊သူ့ခရေလေးကို တံတွေးဆွတ်ပြီး ဒစ်နဲ့တေ့ ဖိသွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်….“အ…..”ဆိုတဲ့ အ.သံရှည်လေးထွက်လာတာကလွဲလို့ ငြင်းဆန်မှုတော့မတွေ့ရပါဘူး…. ဒါနဲ့တံတွေးထပ်ထဲ့ဒစ်ကိုနဲနဲပြန်ထုတ်ပြီး အသာလေးဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်….“အမလေး….”လို့ အော်ပါတယ်…..ကိုလဲအသာလေးငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်…ညီလေးကတော့ ကျပ်စီးပြီး ဝင်သွားတာမို့ အတွင်းထဲမှာ ပြုံးပျော်နေမှာ မြင်ယောင်ပါရဲ့…..ခဏပါပဲ…နေပြီးတော့ အသာလေးထုတ်….အသာလေးသွင်း….လုပ်ပါတယ်….သူက ကိုိ့ကို အားနာလို့ထင်တယ်…ထပ်မအော်ရှာပါဘူး….ကိုလဲ သူခံနိုင်လောက်တယ်ယူဆတာနဲ့ အသွင်းအထုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးလုပ်လိုက်ပါတယ်….
ကျပ်ချက်ကတော့ ဝါးလုံးခေါင်းထဲဆင်တိုးနေရသလားပဲပေါ့နော်….သူု့ကိုလဲပြောရသေးတယ်….“မ ….တင်းမထားနဲ့….လျှော့ထားနော်…”လို့….အဲကျမှပဲ သူလဲနေသာသွားတယ်ထင်တယ်….ခေါင်းက ခေါင်းအုံးပေါ်ကို အားပါးတရ ကျသွားပါတယ်….. ကိုလဲ အသာယာပဲအသွင်းအထုတ်လုပ်နေလိုက်ပါတယ်….တော်တော်လေးကြာတဲ့ အထိပေါ့…နောက်တော့ သူက“လုပ်လေ…”လို့ပြော မီးစိမ်းပြတာနဲ့ ကိုလဲ ဆောင့်တော့တာပေါ့….ဆောင့်ရင်းနဲ့ အားပါလာတော့ ပစ်ပစ်ဆောင့်မိတဲ့အခါ သူ့ဆီက “အမလေး…..အမလေးးးး”ဆိုတဲ့ နာငြီးသံလေးကို ကြားရပါလေရောဗျာ…….ငြီးလေ ဆောင့်လေ ဆောင့်တာပါပဲ….“အား….”လို့ အော်လိုက်တဲ့တစ်ချက်မှာ သူ့ကို သနားတာနဲ့ ညီလေးကို ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်…“နာလားဟင်….”လို့မေးလိုက်တဲ့အခါ“နာတာပေါ့ကွာ…..”လို့ပြောပါတယ်…..ဒါနဲ့ သူ့ကို အနားပေးထားလိုက်ရပါသေးတယ်….ကိုလဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါတယ်……ပြန်ထွက်လာတော့ သူက “လာ…..ပါးစပ်နဲ့လုပ်ပေးမယ်….”တဲ့….ကိုလဲ ဟပ်ကော့ကြီးဆိုတော့ ဆက်ချင်တာနဲ့ သူ့နားသွားလိုက်ပါတယ်….
သူက ကုတင်ပေါ်ကနေမှောက်ရင်နဲ့ ကိုက မတ်တတ်ကို မှုတ်ပေးပါတယ်….ကောင်းပါတယ်…သူလဲ ပညာကုန်သုံးတော့တာပါပဲ….ကိုလဲတစ်ခုသတိရသွားတာနဲ့ စမ်းမယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်….နောက် သူ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်အိပ်ခိုင်းပြီး ခေါင်းကို ကုတင်စွန်း အောက်ရောက်အောင် ရွှေ့ပြီး ဇောက်ထိုးမော့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်….ပြီးမှ ကို့ညီလေးကို သူ့ပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းက တဖျောင့်ထဲဖြစ်သွားတော့ ပါးစပ်လိုးရတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ….သူကလဲလျှာလေးခံထားပေးပြီး ဇက်ကိုလှန်ထားတော့ အဆုံးထိဝင်တော့တာပေါ့ ကိုယ့်လူတို့ရေ…….သူကလဲ မအံရအောင် လေ့ကျင့်ထားတယ်ထင်တယ်….အော့…အေ့ …ဆိုတဲ့ အသံလေးတောင်မကြားရပဲ ကိုဖီးတက်အောင် ညီလေးဝင်နေတဲ့ကြားထဲက အာလုပ်သံလေးနဲ့ ငြီးပေးပါတယ်…ကိုလဲ ဆောင့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလဲ ဆုတ်၊နယ်၊ခြေ အားပါးတရ စိတ်ကြိုက်ကို လုပ်မိနေပါတယ်…နောက်တော့ ကောင်းကကောင်း…အောင့်ထားရတာလဲ နဲနဲကြာပြီဆိုတော့ ဘောအရင်းကနေ စုတက်လာတဲ့ လရေတွေဟာ လင်တံတလျောက် ပြည့်ဝတဲ့ ရသာစုံနဲ့ စီးဆင်းသွားလိုက်တာ သူ့ လျှာပေါ်တောင် ကျချိန်မရပဲ ဆောင့်ဆောင့်ပြီး ပန်းထုတ်လိုက်တာ သူ့အစာအိမ်ထဲများတန်းရောက်သွားသလားအောင်းမေ့ရပြီး ကာမရဲ့အရသာကို စိတ်သဘောတူ နားလည်မျှတသူထံကနေ စိတ်ကြိုက် ခံစားရရှိလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား….ပြီး